Unashamed अष्ट्रेलिया रिक्याप — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
हामी फरक देशबाट विश्वासीहरूलाई समय खर्च गर्न पायो, एक फरक संस्कृति संग, एउटै येशूले हामी के प्रेम फरक पृष्ठभूमिका. विभिन्न देशहरूमा जाने सुख को एक परमेश्वरको योजना को सम्झना भइरहेको छ “आफूलाई लागि फिरौतीको हरेक जातिलाई देखि एक मान्छे।” परमेश्वरको काममा छ, केवल यहाँ, तर दुनियाँ, मान्छे बचत र आफ्नो महिमा लागि तिनीहरूलाई प्रयोग.
हामी पनि Aussies अजीब कुरा सिके. तिनीहरूले खुर्सानी कल “capsicum” र तिनीहरूले पट्टियां कल “तौलिया।” के!? तिनीहरू हामी पनि हुनत कुरा विचार… सबै दोस्तों कलिलो जिन्स घोडा थिए र तिनीहरूले लघु कार को धेरै ड्राइव. विद्यार्थीहरू केही लाग्यो Thi'sl ठूलो थियो (तिनीहरूले त्यो मरेको थियो थाहा थिएन!) र तिनीहरूले सोचे म गज थियो वाह (मेरो proudest क्षण). हाम्रो सेनाहरूका केही लागि मेकअप सम्म दिनुभयो केही स्वादिष्ट Aussie BBQ, पाठो संग, चिकन, र पनि केही कङगारु. यो राम्रो थियो!
This'l केही BBQ कंगारु खाने
म यो किन माया
अष्ट्रेलिया मा मेरो समय विशेषताहरू मध्ये एक मेरा भाइहरू संग बर्खास्त गर्न प्राप्त भएको थियो. यो संगति धनी थियो, सम्बन्ध अझ बलियो थियो, र म ईश्वरीय कुराकानी गरेर edified थियो. म विवाह राम्रो कुराकानी सम्झना, सेवाको, पिता, संगीत, आदि. परमेश्वरको असल कामहरू गर्न मलाई उत्साहित र मलाई थप उहाँलाई जस्तै बनाउन ती कुराकानीहरू प्रयोग. Rappers संग सह-laboring गर्न म कृतज्ञ छु, डीजे गरेको, साँच्चै येशूले प्रेम गर्ने र भ्रमण प्रबन्धकहरू.
तपाईं हो धन्यवाद
म भन्न चाहनुहुन्छ यसलाई के गर्न मद्दत गर्ने मंत्रालयों धन्यवाद, उत्कृष्ट आतिथ्य देखाए गर्ने होस्टहरूको, र समर्थकहरूको पनि संगीत गर्न आएको. अर्को समय सम्म, हामी तपाईंलाई Aussie प्रेम!